Ogaden News Agency (ONA) – Hawl-wadeenada Jaaliyadaha Norway, Canada iyo Faraca Midnimo ee xerada Dhadhaab oo isugu shirar muhiim ah
Hawl-wadeenada Jaaliyadaha Norway, Canada iyo Faraca Midnimo ee xerada Dhadhaab oo isugu shirar muhiim ah
Posted by ONA Admin	/ May 6, 2014
Xubnaha Hogaanka abaabulka ee jaaliyada jaaliyada Norway ayaa ku kulmay 04.05.2014 xafiiska Jaaliyada S.Ogaadeenya ee Norway.
Kulanka ayaa yimid Kadib markii maamulku jaaliyadu magacaabeen gudiga abaabul oo ka kooban 8 xubno Sidii ay u maareeyn lahaayeen hawlaha abaabul ee jaaliyada ay u baahan tahay, shirka ayaa waxaa kasoo qayb galay dhamaan xubnaha gudiga Waxaa ugu horeyn lagu furay aayadaha quraanka kariimka ah, kadib waxaa la guda galay qodobada ajandayaashii shirka. Dood & fikir isweydaarsi Kadib xubnaha waxay Isla meeldhigeen qodobadii muhiim ah oo hirgalintooda ay awoodo jaaliyadda.
Waxaa maalinimadii Axada kulan khadka taleefanka isugu yimid hawlwadeenada JWXO ee dalka Canada, kaas oo uu shir gudoominayey isuduwaha jaaliyadaha Canada mudane Yuusuf Ismaaciil ,waxaana lagu furay sidii caadada ahayd wacdi diiniya oo uu soo jeediyey C/xakiin M. Weli ilaahay, ka dibna waxaa shirka ujeedadiisa si fiican u faahfaahiyey isuduwaha jaaliyadaha Canada isagoo soo bandhigay qorshayaaal muhiim ah oo ujeedada kulan ku ahaa waxaana ka mid ahaa:-
In la sameeyo abaabul heer jaaliyadeed, wadan iyo qaaradeedba. Kobcinta , wacyigelinta iyo fahanka halganka sidii loo gaar siin lahaa dad weynaha Soomaalida Ogaadeeniya ee ku nool dalkaCanada. In shirar joogta ah la qabto kaas oo looga warbixinayo hagardaamooyinka gumaysigu ka Wado Ogaadeeniya iyo waxa ka socda.
Shirkaa waxaa ka soo qayb galey dhamaan madaxda jaaliyadaha, ururka haweenka, xubnaha dhalinyarada OYSU, Kaadirka iyo Madaxda golaha dhexe ee ku sugan dalkaCanada. Jaaliyadaha kasoo qaybgalay waxay kala ahaayeen jaaliyadda Winnipeg, Ottawa, Toronto, Kitchener, FortMcCurryiyo magaaladaEdmonton.
Shirka markuu furmay ayay si fiican xubnuhu uga doodeen qodobadaas iyagoo ku soo kordhiyey shirka aragtiyo cusub oo aad waxtar u leh.
Waxaa hadal kooban halkaa ka soo jeediyey madaxa hay’ada daryeelka agoonta iyo waxbarashada geeska afrika mudane c/raxmaan yuusuf oo ka warbixiyey xaalada bariga afrika hada ay ku sugan tahay iyo in wax loo qabto agoonta, dhaawaca, iyo danyarta S.Ogaadeeniya ee ku sugan Bariga Afrika.
Maalinimadii Axada oy taariikhduna ay kubeegnayd 4/5/14 ayaa waxaa kulan howleed isugu yimid maamulka faraca MIDNIMO iyo golaha kaadirka ee faraca MIDNIMO kulankan oo ahaa kulan shaqo qaybsi iyo dardar galinta arimaha faraca iyo guud ahaan halganka ayaa sidoo kale hogaan cusub loogu sameeyay golaha kaadirka ee faraca midnimo ee kahowl gala xerada Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab.
Kulankan oo bilowday abaare 2:00 duhurnimo ayaa sidii caadada ahaydba lagu bilaabay aayadaha qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah waxaana lasii guda galay ajandayaashii shirka oo ka koobnaa dhowr qodob oo muhiim ah ka dib iswaraysi iyo kala xog qaadasho ay kala xog qaadanayeen howlwadeenadii madasha fadhiyay oo isugu jiray maamulkii faraca iyo golihii kaadirka ee faraca.
Kulanka ayaa diirada lagu saaray howlaha halganka ee Dhadhaab iyo hor u marinta howlaha faraca waxaana La’isla qiray in howlaha halganka ee Dhadhaab wax badan laga qabtay waxna ay dhiman yihiin waxaana gaar ahaan maamulka faraca lagu amaanay howsha muhiimka ah ay u hayaan faraca iyo guud ahaan umada s.ogadenia ee halganka ugu jirta sidii ay u hanan lahaayeen ciidoodii xooga lagaga qaatay.
Dhanka kale waxaa kulakan lagu magacaabay hogaan cusub oo uu yeesho golaha kaadirka ee faracu kadib markuu xilkii kadhamaaday hogaankii hore ee kaadirka waxaana warbixin laga dhagaystay hogaankii hore ee xilka baneeyay isagoo lagu amaanay waxqabadkiisii mudadii uu xilka hayay waxayna maamulka faracu soomagacaabeen hogaan cusub oo sanadka soo socda hadii Alle idmo hayndoona xilka hogaanka golaha kaadirka ee faraca MIDNIMO.